Ungayisebenzisa kanjani iBinance - mobile, future future trading, app, api, future, dex -
June 8, 2021 June 7, 2021 by cks2
Nasi isifinyezo sezinzuzo zokujoyina iBinance Exchange!
Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bafuna izindlela zokubhalisela iBinance ngoba inezinzuzo ezimbalwa.
Kubukeka sengathi abantu abaningi basebenzisa iBinance Exchange, okuyi-exchange enkulu kunazo zonke emhlabeni, kunezingxoxo zasekhaya.
Mhlawumbe kungenxa yenzuzo yokukwazi ukushaya ama-single hits sibonga ivolumu yokuhweba eningi kanye nethuba lokuhweba ngomkhawulo ekuhwebeni kwesikhathi esizayo, akunjalo?
Ikhodi yokudlulisela yokubhalisa ye-Binance (20% indawo 20% yesipho 10% isaphulelo sempilo yonke)
Uma ungabhalisanga okwamanje ngaphambi kokuthi wazi ukuthi uyisebenzisa kanjani iBinance, sukuma ufike ku-20% wekhomishini enekhodi yokudlulisela.
Chofoza isixhumanisi esingenhla noma chofoza isithombe sesixhumanisi.
1. Ukusekelwa kokuhweba kwesikhathi esizayo: ukuvimba okungenzeka kunqatshelwe ukwehla
2. Ukusekelwa kokuhweba kweMargin: Ukubuya okuphezulu kungenzeka ngenxa yokuhweba okuphezulu kokuphindaphinda
3.Ukuba nemali yakho ye-BNB: Kunikezwa izaphulelo ezahlukahlukene zezimali lapho uphethe i-Binance Coin
4. Ukuthengiselana kwe-Arbitrage kungenzeka: Ukuthengiselana kwe-Arbitrage kungenzeka kusetshenziswa i-premium yaseKorea
5. Uhlelo oluzinzile: Uma kuqhathaniswa nokuhwebelana kwasekhaya, ayikho i-lag futhi ayiyeki
6. Ivolumu yokuhweba ephezulu: Ivolumu ephezulu yokuhweba ingagaywa
7. Isiteki: Imikhiqizo yediphozi (staking) ingenza imali yenzalo
8. Ukusekelwa kwama-cryptocurrensets ahlukahlukene: Amakhulu ezinhlamvu zemali ezahlukahlukene ezingathengiswa eKorea ayatholakala
9. Imali ephansi: Imali ephansi uma iqhathaniswa nokuhwebelana kwasekhaya
Ungayibhalisela kanjani iBinance
Manje, ake sibheke ukuthi ungabhalisela kanjani uBinance.
1. Thola isephulelo semali
Ngezansi kwekhodi yesaphulelo se-Binance Fee.
Uzothola isaphulelo esingu-20% kumali yokuhweba yokuphila lapho ubhalisela iBinance ngalesi sixhumanisi.
Asikho isaphulelo semali uma ubhalisa nje, ngakho-ke sincoma ukuthi ubhalise usebenzisa isixhumanisi esingezansi.
Isixhumanisi Sesaphulelo Se-Binance Fee
2. Dala i-akhawunti
Njengengxenye yenqubo yokubhalisa ye-Binance, ungabhalisa usebenzisa inombolo yakho yeselula nekheli le-imeyili phakathi nenqubo yokudala i-akhawunti.
Ungabhalisa ngendlela evumelana nawe.
Abaningi benu babhalise nge-imeyili, ngakho-ke kulokhu okuthunyelwe, sizoqhubeka naleyo ndlela.
Faka iphasiwedi yakho ne-imeyili bese uqhafaza Yakha i-Akhawunti.
3. Ukuqinisekiswa kokuphepha
Qedela ukuqinisekiswa kokuphepha ngokuxazulula amaphazili avimbela ugaxekile noma ukubhalisa okuzenzakalelayo.
4. Ukuqinisekisa i-Akhawunti
Ukuqinisekisa i-akhawunti yakho, hlola ikhodi yokuqinisekisa enamadijithi ayi-6 ethunyelwe ku-imeyili yakho bese uyifaka esikrinini njengoba injalo.
Ikhodi isebenza imizuzu engama-30.
5. Ukubhaliswa okungeziwe kwesitifiketi sokuphepha
Uma uqhubeka ngqo nokuthengiselana esinyathelweni esingenhla, kunengozi yokugenca ngenxa yezinga eliphansi lokuphepha.
Lokhu kusho ukuthi noma ngabe elinye lamaphasiwedi akho noma i-imeyili ligqekeziwe, izimpahla zakho zingafakwa engcupheni ngokushesha.
Ngakho-ke, sincoma ukuthi usebenzise ukuqinisekiswa kwe-Google noma ukufakazela ubuqiniso kwefoni njengokubhaliswa okungeziwe.
Izindlela Zokufaka Idiphozithi
Ukuze uhwebe ngokushintshaniswa komhlaba wonke iBinance Exchange, ungasebenzisa ukushintshana kwasekhaya okufana ne-Upbit neBithumb.
Kufanele usebenzise indlela yokuthenga nokudlulisa izinhlamvu zemali.
Ukukhokhwa kwemali ngqo ku-Binance kuvinjelwe.
Ngokuvamile, abantu abaningi bahamba ngokuthenga i-Ethereum noma i-Bitcoin.
Ungathumela ngokufaka ikheli lediphozi le-Binance kukheli lokuhoxiswa ekushintshaneni kwasekhaya (Upbit, Bithumb).
(I-Ripple iyashesha kunokuthumela i-Bitcoin.)
Ungayisebenzisa kanjani iBinance
Ngemuva kokuqeda lezi zinyathelo ezingenhla, chofoza inkinobho yeMakethe, bese kuvela iscreen transaction screen.
IBinance ingukushintshaniswa okungu-1 emhlabeni, ngakho-ke wonke amamenyu asekelwa ngesiKorea njengokushintshaniswa kwasekhaya.
Ngaphezu kwalokho, indlela yokuthengiselana iyefana nokushintshaniswa kwaseKorea, futhi inikeza imisebenzi eyahlukahlukene edlula leyo, ngakho-ke ngeke ube nobunzima bokuyisebenzisa.
Ukuze uthole imiyalo eningiliziwe yokuthi ungayisebenzisa kanjani iBinance, bona ukuthi Ungathengisa Kanjani ngeBinance Exchange Futures neMargin.
Ungasayinela kanjani i-Binance Ungayifaka kanjani imali Isifinyezo Sesaphulelo Semali
Kokuthunyelwe kwanamuhla, sizothatha isikhathi sokufunda kabanzi mayelana nokuthi ungabhalisa kanjani futhi ufake imali ku-Binance, nokuthi ungasisebenzisa kanjani isaphulelo semali.
IBinance, okushintshaniswa kwempahla enkulu kunazo zonke futhi engcono kunazo zonke emhlabeni, inevolumu enkulu kakhulu yokuhweba kunevolumu yokuhweba ehlanganisiwe yezinhlangano ezinkulu zasekhaya ezinjenge-Upbit neBithumb.
Lokhu kungenxa yokuthi isekela ivolumu yokuhweba eningi nokuhweba okuzayo kwesikhathi esizayo.
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani abantu abaningi befuna izindlela zokubhalisela iBinance.
Ngoba isekela izindlela ezahlukahlukene zokuhweba nezinhlobo zama-cryptocurrensets, njengokushintshaniswa okuhle kakhulu emhlabeni, unezinhlobo ezahlukahlukene zokukhetha futhi ungasebenzisa izinhlelo ezahlukahlukene zokuhweba.
Categories Ungayisebenzisa kanjani iBinance Tags i-binance api, IBinance Bitcoin, Idiphozithi ye-Binance, Imajini ye-Binance, Imali ekhokhwayo ye-Binance Futures, Imali yeBinance, Imibuzo ye-Binance Margin, Ishadi leBinance, Izindlela Zokuhweba ze-Binance Margin, Joyina i-Binance, Ukukhokhwa kwekhadi leBinance, Ungayithengisa Kanjani Ikusasa leBinance Post navigation